निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू - GharGhaderi.com
निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू
भौतिक पुर्वाधार लगायत अन्य संरचना निर्माण गर्दा निर्माण सामाग्रीको मुख्य भुमिका हुन्छ । निर्माणपुर्ब निर्माण सामाग्री बारे गहिरो अध्ययन गर्दा पछि पछुताउनु पर्दैन । निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्नुपुर्ब ख्याल गर्नुपर्ने केही कुराहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सिमेण्टको भूमिका विशेष किसिमको हुन्छ । राम्रो सिमेण्ट छनोट गर्न नसकेको अवस्थामा कतिपय सपना केवल सपनामै सीमित हुन पुगेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । तर, यसो भन्दैमा सिमेण्टले मात्र यसमा असर पार्छ भन्ने होइन ।
सिमेण्टसँगै अन्य आवश्यक निर्माण सामग्रीको उचित प्रयोग हुन सकेमा हामीले निर्माण गर्न लागेको संरचना दीर्घकालसम्म जस्ताको त्यस्तै रहने किसिमको हुन्छ । साथै, सिमेण्टको भण्डारण, मिश्रणको परिमाण र प्रयोग विधिले पनि यसको टिकाउपनामा असर पार्छ ।
सिमेण्टका उत्पादनमध्ये, ओपीसी सिमेण्ट हाइड्रोपावर, पुल, सडक, अपार्टमेण्टजस्ता ठूला परियोजनाका लागि उपयुक्त छ । त्यस्तै, पीपीसी सिमेण्ट अन्य सबैखाले भौतिक निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
भण्डारणले पनि सिमेण्टको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ । यदि, भण्डारण गर्दा गलत तरीका अपनाइयो भने प्रयोग गर्नुअगावै डल्लो पर्ने र गुणस्तर खस्किँदै जाने सम्भावना रहन्छ । वर्षायाममा सिमेण्ट भण्डारण गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन सकिएन भने बिग्रिएर कामै नलाग्ने हुन सक्छ । त्यसैले, सिमेण्ट भण्डारण गर्दा कहिल्यै पनि भित्तामा टाँसिने गरी राख्नुहुँदैन । साथै, भुइँमा काठ बिछ्याएर वा टाँड बनाएर मात्र सिमेण्ट भण्डारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
भण्डारण गर्ने स्थानको झ्याल, ढोका सधैं बन्द राख्नुपर्छ भने एउटा चाङमा सामान्यतया १० बोराभन्दा बढी राख्नु राम्रो मानिँदैन । यदि, निर्माणाधीन भवनमै राख्ने हो भने भवन पूर्णरूपले सुकेको हुनुपर्छ । अन्यथा, प्रयोग गर्नुअघि नै सिमेण्ट ओसिएर काम नलाग्ने हुन सक्छ । साथै, सिमेण्ट झिक्दा माथिको मात्र नभई सबैतिरबाट झिक्दै जानुपर्छ र समयसमयमा तलमाथिको उल्ट्याइदिनुपर्छ ।
भवन वा अन्य निर्माण कार्यमा सिमेण्टसँगै इँटाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले इँटा खरीद गर्नुपूर्व यसबारे आवश्यक जानकारी लिनुपर्छ । सामान्यतया राम्रो इँटाको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ क्रमशः ९, ४ र २ इञ्च हुनुपर्छ । राम्रोसँग पाकेको इँटाको रङ निक्खर रातो हुन्छ भने दुईओटा इँटालाई आपसमा ठोक्काउँदा धातु जुधाउँदा आउनेजस्तो आवाज आउनुपर्छ । साथै, एक मिटर माथिबाट भुइँमा झार्दा फुट्नुहुँदैन । सामान्यतया इँटा १, २ र ३ नम्बरका हुन्छन् । यसको वर्गीकरणअनुसार भारवहन क्षमता निर्धारण गरिएको छ ।
इँटाको भारवहन क्षमता
१. नम्बर इँटाको भारवहन क्षमता ७० किलोग्राम प्रतिवर्ग सेण्टिमिटरभन्दा बढी
२. नम्बर इँटाको भारवहन क्षमता ३५–७० किलोग्राम प्रतिवर्ग सेण्टिमिटर
३. नम्बर इँटाको भारवहन क्षमता ३५ किलोग्राम प्रतिवर्ग सेण्टिमिटरभन्दा कम
इँटा प्रयोग गर्दा पानीको विशेष महत्व हुन्छ । यदि, सुक्खा इँटाको प्रयोग गरिँदै छ भने मसला ९सिमेण्ट, बालुवा र पानीको घोल०मा रहेको पानी तुरुन्त इँटाले सोस्छ र निर्माण गर्दै गरेको संरचनाको गुणस्तर कमजोर हुन पुग्छ । त्यसैले, इँटाको प्रयोग गर्दा भिजाएर मात्र गर्नु उपयुक्त हुन्छ । इँटा प्रयोग गर्नुपहिले भिजाउनाले इँटामा भएको धूलो वा माटो पखालिने भएका कारण सिमेण्टसँगको जोड बलियो हुन्छ र हामीले बनाउँदै गरेको संरचना बलियो हुन जान्छ । पानी कम भएको स्थानमा इँटा भिजाउन ड्रमको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
बालुवाको गुणस्तरले पनि निर्माण हुँदै गरेको संरचनाको टिकाउपनामा विशेष प्रभाव पार्छ । बालुवामा माटो तथा अन्य पदार्थ मिसिएमा घर वा अन्य संरचना चर्किने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्ने बालुवा समान ग्रेडको हुनुका साथै काठ, कागज वा अन्य वस्तु नमिसिएको हुनुपर्छ । प्लाष्टर तथा ढलानका लागि पनि फरकफरक किसिमका बालुवाको आवश्यकता पर्छ । सामान्यतया ढलानका लागि खस्रो बालुवा उपयोगी हुन्छ भने प्लाष्टर गर्नका लागि १ सय मेसको जालीले छान्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खेर नजाने किसिमको हुनुपर्छ ।
बालुवाजस्तै गिट्टी पनि सफा हुनुका साथै समान आकारको भए राम्रो हुन्छ । प्रयोग गर्न लागेको गिट्टीमा काठका टुक्रा, कागज, घाँसपात भए हटाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । गिट्टी पनि प्रयोग गर्नुअघि पखालेमा त्यसमा भएका माटो हटेर निर्माण अझ बलियो हुन्छ ।
निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने छडले पनि संरचनाको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ । सामान्यतया घर तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि ल्याइने छड खुला चौरमा त्यत्तिकै छाडिएको पाइन्छ । तर, त्यसरी राख्दा खिया लागेर छडको क्षमता ह्रास भइरहेको हुन्छ । त्यसैले, सबैभन्दा पहिला गुणस्तरीय छडको छनोट गरी सुक्खा स्थानमा भण्डारण गर्नुपर्छ । यदि, घरबाहिर राख्ने हो भने जस्ता वा पालले छाना बनाएर भुइँमा काठको टाँड बनाएर मात्र राख्नुपर्छ ।
सामान्यतया घर बनाउँदा प्रयोग गरिने पानी जस्तो भए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, यस्ता काममा प्रयोग गरिने पानी सफा भएन भने अन्य निर्माण सामग्री जति नै राम्रो भए पनि हामीले बनाउने संरचना गुणस्तरीय बन्न सक्दैन । त्यसैले, त्यस्ता कार्यमा प्रयोग गर्ने पानी पनि पिउनयोग्य हुनुपर्छ । पानीमा नून तथा अन्य रासायनिक पदार्थ र साबुन, माटो गोबर आदि मिसिएको हुनुहुँदैन । पानीमा यस्ता पदार्थ मिसिएमा सिमेण्टको पकड क्षमता ह्रास हुँदै जान्छ ।
सिमेण्टलगायत निर्माण सामग्री प्रयोग विधि
कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सिमेण्ट बालुवाको सही अनुपात भएमा मात्र बन्ने संरचना गुणस्तरीय हुन्छ । वाल लगाउँदा इँटाको जोडाइमा सिमेण्ट र बालुवाको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । सामान्यतया ९ इञ्चको पर्खाल लगाउँदा १ः६ र ४ इञ्चको पर्खालमा १ः४ को अनुपातमा मसला बनाउने गरिन्छ ।
यसरी पर्खालको चौडाइअनुसार मसलाको अनुपात मिलाउँदा त्यसको भार वहन क्षमतामा कमी आउँदैन । पर्खाल लगाउँदा दुई इँटाको बीचमा राम्रोसँग मसला हालिएको हुनुपर्छ भने तलदेखि माथिसम्म सीधा ज्वाइण्ट पर्ने गरी लगाउनुहुँदैन । हरेक इँटालाई माथिपट्टि बुट्टा पर्ने गरी मिलाएर लगाउनुपर्छ । त्यस्तै, सबै ज्वाइण्टको ग्याप समान हुनुपर्छ । पर्खाल लगाउने कार्य सकिएको एक हप्तासम्म निरन्तर पानीले भिजाएर राख्नुपर्छ ।
सिमेण्ट, बालुवा र पानीको समिश्रणबाट पर्खालमा लेप लगाउने कार्य प्लाष्टरिङ हो । प्लाष्टर गर्नुको मुख्य उद्देश्य पर्खाललाई बलियो बनाउने, पर्खाल लगाउँदा भएका कमीकमजोरीलाई छोप्ने, पर्खालको सतह राम्रो बनाई रङ लगाउन योग्य बनाउने नै हो । साथै, भवनको बाहिरी भागमा गरिने प्लाष्टरले वर्षातको पानीलाई सोस्नबाट बचाउँछ ।
प्लाष्टर गर्दा पनि सिमेण्ट, बालुवा र पानीको मात्रामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सामान्यतया उपयोगिताका आधारमा प्लाष्टरका लागि बनाइने मसलाको अनुपात १ः३ देखि १ः६ सम्म गर्न सकिन्छ । सोहीअनुरूप धेरै गिलो वा साह्रो नहुने गरी पानी मिसाउनुपर्छ । साथै, पर्खालमा प्लाष्टर गर्नुअघि त्यसलाई राम्रोसँग भिजाउन जरुरी हुन्छ । तयार पारिने मसला बढीमा डेढ घण्टासम्ममा सकिने हुनुपर्छ । अन्यथा, प्लाष्टरको टिकाउपनामा ह्रास आउन सक्छ । प्लाष्टर बलियो बनाउन प्लाष्टरिङ सकिएको एक दिन पछिदेखि एक हप्तासम्म पानीले भिजाइरहनुपर्छ ।
सबैलाई सुरक्षित छतको चाहना हुन्छ । आफ्नो छत बढी सुरक्षित बनाउन फर्मा लगाउनेदेखि मसला बनाउने र सेट गर्नेसम्मका प्रक्रियामा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा बजारमा रेडिमिक्स कङ्क्रिटदेखि ब्याचिङ प्लाण्ट, कङ्क्रिट पम्पिङ र कङ्क्रिट मिक्स्चरजस्ता आधुनिक उपकरण सहजै उपलब्ध हुन थालेका छन् ।
तर, सबै प्रयोगकर्ताको पहुँच त्यस्ता मेशिनहरूमा अझै पुग्न सकेको छैन । तर, निर्माण सामग्रीको सही अनुपात, स्तरीय निर्माण सामग्री र मसला बनाउँदा विशेष ध्यान पुर्या उन सकियो भने सामान्य मिक्स्चरबाट पनि राम्रो मसला बनाउन सकिन्छ । तर, ढलानका लागि तयार गरिने मसलाको घोल राम्रोसँग तयार भएको हुनुपर्छ ।